Amachibi amakhulu eMelika | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | | EU.SA
Kumda ophakathi kweKhanada ne-United States kukho amachibi amahlanu amakhulu alawula imimandla emikhulu kwaye apho ubuninzi bamanzi amatsha acocekileyo kwiplanethi kugxile: UMichigan, Superior, Ontario, Huron noErie. Nangona beziphatha njengolwandle oluvaliweyo, amanzi abo ahlaziyekile kwaye aqulathanga ngaphantsi kwesihlanu soovimba boMhlaba.
La machibi mahlanu makhulu anikezela ngeelwandle iilwandle, amawa, iindunduma, ubuninzi bezindlu zokukhanya, iziqithi ezinonxweme kunye needolophu zokutyelela. Akumangalisi ke ukuba kubizwe "Unxweme lwesithathu" kuba la machibi yindawo yokuhlala yeentlobo ezahlukeneyo zezilwanyana. Ukongeza, amaphenyane azo zonke iintlobo ahamba ngolwandiso lwamanzi acocekileyo kwaye kuqhelekile ukuba abalobi kunye nabathandi be-kayak baxube nezikhephe, i-cargo steamers, i-tugs, njl.
Ukutyelela amachibi amahlanu amakhulu eMelika yinto efanelekileyo yeholide. Ukuba le yimeko yakho kwaye ungathanda ukubandwendwela, emva koko ndiza kufumanisa okungakumbi malunga nale mimangaliso yendalo.
1 ILake Michigan
2 IChibi elingaphezulu
3 Ichibi laseOntario
4 IChibi laseHuron
5 Ichibi erie
ILake Michigan lelinye lamachibi amahlanu amakhulu e-United States kodwa kuphela kwelo lipheleleyo kweli lizwe okoko abanye babelanayo neCanada. Ijikelezwe yimimandla yaseWisconsin, eIllinois, eIndiana naseMichigan, ethiywe ngegama ledike uqobo.
Eli chibi linendawo engama-57.750 eekhilomitha kwaye linobunzulu beemitha ezingama-281. Ithathelwa ingqalelo njengelona chibi likhulu kwilizwe kunye nesihlanu emhlabeni. Umthamo wayo yi-4.918 cubic km yamanzi kwaye iLake Michigan idibanisa iipaki ezininzi kunye neelwandle.
Abantu abamalunga nezigidi ezili-12 bahlala kunxweme lwayo, uninzi lwabo kwiindawo ezincinci zabakhenkethi eziphila kumathuba anikezelwa yiLake Michigan. Ukuchitha usuku undwendwela ichibi ngumbono olungileyo ukonwabela indalo ngaphandle, uphumle kwaye unqamle kwizinto eziqhelekileyo. Isicwangciso esimnandi kakhulu kukukhwela iphenyane lokuwela ichibi. Emva koko, akukho nto ibhetele kunokuzama ukutya kwasekuhlaleni okutyebileyo kwi-salmon kunye ne-trout.
Kunxweme lweLake Michigan, kwiphondo laseIllinois, sesinye sezona zixeko zibalulekileyo eUnited States: eChicago. Yaziwa njengesiXeko saseWindy, sisixeko sesithathu esinabemi abaninzi eUnited States, emva kweNew York neLos Angeles.
Yidolophu yanamhlanje neyendalo yonke enekhaya elingaphezulu kwe-1.100 skyscrapers. Okwangoku esona sakhiwo siphakamileyo yiWillis Tower (eyayisakubizwa ngokuba yiSears Tower), kodwa pha kwiminyaka yoo-1920 yayisisakhiwo iWrigley, inqaba yayo eyenzelwe emva kweGiralda eseSeville.
Eli chibi linemida iMinnesota, iWisconsin, neMichigan kwicala lase-US nase-Ontario kwicala laseCanada. Isizwe sase-Ojibwe sayibiza ngokuba yiGichigami oko kuthetha ukuba "ngamanzi amakhulu" kwaye lelona chibi likhulu lamanzi angenawo amanzi ehlabathini. Ukukunika umbono wobungakanani bayo obunomtsalane, iLake Superior inokuqulatha umthamo wawo onke amanye amaLwandle amakhulu kunye nezinye ezintathu ezinjengeLake Erie. Yeyona nzulu, inkulu kwaye ibanda kakhulu kuMachibi Amakhulu eMelika.
Njengomdla, izivunguvungu eLake Superior zivelisa amaza eerekhodi ngaphezulu kweemitha ezi-6, kodwa amaza angaphezu kweemitha ezili-9 abhalisiwe. Kuyamangalisa!
Kwelinye icala, ngaphakathi kweli chibi kukho iziqithi ezininzi apho esona siqithi sikhulu yiRoyale Island kwiphondo laseMichigan. Oku kuqulethe amanye amachibi aneziqithi. Kwimeko nayiphi na into, ezinye iziqithi ezinkulu ezidumileyo zeLake Superior zibandakanya isiqithi saseMichipicoten kwiphondo laseOntario naseMadeline Island kwiphondo laseWisconsin.
Ngokwahlukileyo, elona chibi lincinci kumachibi amakhulu eMelika yiLake Ontario. Ime kwimpuma engaphezulu kwawo onke amachibi kwaye yeyaseCanada naseMelika: Inxalenye esemantla yephondo lase-Ontario kunye nenxalenye esemazantsi kwiphondo laseNew York.
NjengaseLake Superior, ikwanazo neziqithi ezininzi, esona sikhulu sisiqithi i-Wolfer Island, esikwi-Kingston ekungeneni koMlambo iSt. Lawrence.
Ukuba sithetha ngamaziko abemi achaziweyo malunga neLake Ontario, sifumanisa ukuba kunxweme olusentshona lweCanada yindawo enkulu ebizwa ngokuba yiGolden Horseshoe ehlala abantu abamalunga nezigidi ezili-9 kwaye iquka izixeko zaseHamilton kunye neToronto. Kwicala laseMelika, unxweme lwayo ikakhulu lusezilalini ngaphandle kwaseRochester eMonroe County (eNew York).
Ngaphakathi, malunga neekhilomitha ezingama-30, sinokufumana isixeko saseSirakuse kwaye sinxibelelene nechibi ngumjelo. Malunga nezigidi ezi-2 zabemi bahlala kwicala laseMelika.
ILake Huron lelinye laMachibi Amakhulu eUnited States, ngokukodwa ngokobukhulu bayo yeyesibini ngobukhulu kwesihlanu nakwesesine ngobukhulu emhlabeni. Inkulu kunayo yonke iCroatia! Ime phakathi kwe-United States ne-Canada, kumbindi we-Mntla Melika kwaye yenye yezona ndawo zindwendwelwe umhlaba wazo mhle, ngakumbi ngabakhenkethi.
ILake Huron yindawo ekhethwe ngabantu abaninzi baseMelika ukuba bachithe ikhefu labo. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni, ukhenketho luququzelelwa zijikeleze iindawo ezisingqongileyo ukuze lwazi indalo yasekuhlaleni kunye neendawo ezithile zembali kufutshane neLake Huron, ezinjengeNdlu yokuKhanya. Olu tyelelo luvumela iindwendwe ukuba zifunde ngakumbi malunga nembali yale ndawo kwaye zibazi ubuncwane bendalo ngokweenkcukacha.
Ukongeza, kukho imisebenzi yamanzi enje nge-kayaking okanye i-scuba diving. Nditsho nokuhamba ngeenyawo ukuya kwelinye lamawaka eziqithi ezineli chibi. Xa zingenakufikeleleka, abantu banelisekile ukubangqonga njengeThenip edumileyo, eyona ifoto yazo zonke inehlathi elimhlophe lepayini ngaphezulu.
Njengomdla, iLake Huron igcwele iziqithi, uninzi lwazo lubekwe emantla, ngaphakathi kwemida yaseCanada, kuba sisiQithi iManitoulin, esona sikhulu kwiplanethi yamachibi anamanzi amnandi.
ILake Erie lelona lizwe lisemazantsi emaLwandle amaHlanu eGreat e-United States kunye nelona lincinci. Ime kumda we-Ontario eCanada kwaye isebenza njengemida kunye nePennsylvania, iOhio, iMichigan neNew York kwicala laseMelika.
Ngenxa yobukhulu bayo (ithatha malunga ne-25.700 yeekhilomitha), ithathwa njengechibi leshumi elinesithathu lendalo emhlabeni. Ukuhamba ngeenqanawa ngokupheleleyo, inokuphakama ngaphezu komphakamo wolwandle weemitha ezili-173 kunye nobunzulu obuphakathi kweemitha ezili-19; Ngale ndlela, lelona lincinci lamachibi amakhulu.
Yayiyindawo yokugqibela yamachibi amakhulu ukufunyanwa kunye nabahloli bamazwe baseFrance abayibiza ngokuba yiLake Erie emva kwesizwe esinegama elifanayo elihlala kule ndawo.
Njengamanye amachibi, zininzi iziqithi kwiLake Erie ngokunjalo. Zizonke zingamashumi amabini anesine, ezisithoba zazo yeyaseKhanada. Ezinye zeziqithi ezikhulu sisiqithi saseKelleys, iSouth Bass Island, okanye iJohnson's Island.
Njengomdla, iLake Erie ine-microclimate yayo, eyenza ukuba le ndawo ichume ukukhulisa iziqhamo, imifuno kunye nemidiliya yokwenza iwayini. ILake Erie ikwadume kakhulu ngeLake Effect blizzards ephosa kumadlelo asempuma esixeko, ukusuka eShaker Heights ukuya eBuffalo. Oku kwenzeka ngasekupheleni kobusika nasekuqaleni kwentwasahlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Amachibi amakhulu eMelika